ယနေ့မနက် ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိုဗစ်လူနာစာရင်းမှာ ဗဟိုစည်ဆေးရုံက ဝန်ထမ်း (၃၁) ဦးပါဝင် – White Sone
ယနေ့မနက် ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိုဗစ်လူနာစာရင်းမှာ ဗဟိုစည်ဆေးရုံက ဝန်ထမ်း (၃၁) ဦးပါဝင်
ယနေ့မနက် ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိုဗစ်လူနာစာရင်းမှာ ဗဟိုစည်ဆေးရုံက ဝန်ထမ်း (၃၁) ဦးပါဝင်…
ယနေ့မနက် ကိုဗစ်လူနာစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဗဟိုစည်ဆေးရုံက ဝန်ထမ်း (၃၁)ယောက်နဲ့ ဗဟိုစည်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း (၁)ယောက်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဗဟိုစည်အိမ်ရာ၊ အမှတ် (၁ဝ)ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးဆီက သိရပါတယ်။
ဗဟိုစည်ဆေးရုံ အဆောင် (၁၁)နဲ့ (၁၂)မှာ ကိုဗစ်လူနာနဲ့ထိတွေ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့သူ အယောက် (၄၇)ယောက်ကို Quarantine ထားထားပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့က ဓာတ်ခွဲနမူနာယူပြီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အချိန် (၃၂) ယောက်မှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ဗဟိုစည်ဆေးရုံမှာ ကိုဗစ်ပိုးစတွေ့ခဲ့တဲ့ အချိန်ကစပြီး ထိတွေ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ သူတွေကို Quarantine ဝင်ခိုင်းထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂)ရက်လောက် Swab ယူပြီး စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါမှာ တွေ့ခဲ့တာပါ” လို့ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၁ဝ)ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးဦးတင်ဝေက ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့က ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့ ဗဟိုစည်အထူးကုဆေးရုံနဲ့ ဗဟိုစည်အိမ်ရာဝင်းကို Lockdown ချထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ (၄) ဦး ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်လူနာ (၃၆၃၆)ယောက် ပြန်ကောင်းမွန်သူ (၈၃၂)ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ (၃၉) ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ပိုက်ဆံရှိလူတန်းစား ပညာတတ်လူမျိုးတွေကြောင့် ရန်ကုန်မှာ ပိုးက ပိုပြန့်နေတာပါ
ဘောလီဘော ပုတ်တမ်း ကစားကြမယ့် ပိုးတွေ့ဝန်ထမ်း (၉၂) ဦးထိရှိတဲ့ ကေတီဗွီရဲ့ ပိုင်ရှင်ကိစ္စ
ဒီရေတက်နေသော သာကေတ မိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်းမှ...
နေပြည်တော်ခုတင် (၁၀၀၀) ဆေးရုံသို့ သေဆုံးပြီး...
Q ဝင်နေတုန်း လိုအပ်ချက်တွေကိုပါ ပြင်ဆင်ပေးသွားတဲ့...
ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာနဲ့ တအိမ်တည်းနေတဲ့သူကို Q...
မြောက်ဒဂုံတွင် ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဆေးခန်းမှ သူနာပြုဆရာမ...
ဇနီးသည်နှင့် စကားများ၍ အဆိပ်သောက် ဆေးရုံရောက်သည့်...
Copyright © 2020. Created by whitesone.